Ubuciko bezingane: Ukuqabula okundizayo | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Ubuciko bezingane: Ukuqabula okundizayo
Umhlaba Santiago | | Yezandla, Imisebenzi yezandla yezingane
Kunemisebenzi engenamkhawulo esingayenza ngezandla zethu nangezinye izinto eziyisisekelo futhi singenza abancane bethu bajabule kakhulu ngayo ... Kuyintokozo enkulu ukuyenza ubuciko! Ngiyethemba uyange ngoba namuhla sizokwenza ukuqabulana okundizayo. Ake sibone ukuthi ucabangani!
Ukuze ingahambi emakhoneni bese iyisebenzisa, sizoyenza uzibuthe ohlekisayo ukufaka efrijini lethu. Ngakho-ke siyohlala sinakho ukwanga kwengane yethu eduze. Ake siqale ukusebenza:
Kulula njengokwenza isiyingi kunoma yiliphi iphepha, ungasisebenzisa ngombala ukuze uhehe futhi uthandeke. Sipenda izindebe zabancane ngezindebe ezithile ezinemibala (ngokwesibonelo obomvu) ukuze bakwazi ukuqabula phakathi nendawo kwendilinga bese beshiya uphawu, oluzomela “ukwanga okundizayo”.
Ngemuva kwalokho sizodweba futhi sisike amanye amaphiko, ngoba ngaphandle kwalezi, ngabe bekungekho ukundiza! Sithatha ukotini bese siwunamathisela emaphikweni ngeglu, sizowukhipha bese siwusabalalisa ukuze ungabiliswa kakhulu kwazise sizowunamathisela kamuva. Lapho nje sesinamaphiko nombuthano usulungile, sizozihlanganisa zibe yinto eyodwa.
Ungazisiza ngeglu encane ukuze ubambe kangcono amaphiko ezinhlangothini zombili zombuthano, yize empeleni kungadingekile uma siyinamathisela ngokunemba. Ngalokhu sizosebenzisa ulwelwesi olujwayelekile nolwejwayelekile ekunciphiseni izincwadi zesikole, singakuthola kalula kunoma ikuphi konke. Siqale siyinamathe ngakolunye uhlangothi, siqaphele ukuthi singashiyi amagwebu omoya. Bese siyiphendula bese siyinamathisela kolunye uhlangothi lwangemuva, ukuze ulwelwesi lwangaphambili lunamathele emuva emaphethelweni.
Ekugcineni sinqume ukushiya unqenqema oluncane ukuze izindwangu zinamathele kahle futhi ukuqabulana kwethu okundizayo kuhlala kungcono futhi kungaphumi. Ekugcineni, ohlangothini olungemuva sinamathisele ucezu lukazibuthe futhi sesivele sinomazibuthe wethu wasefrijini ngokwanga kwendodana / indodakazi yethu!
Imininingwane engaphezulu - Ubuciko bezingane: Isifihla-busu se-pig
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » Ubuciko bezingane: Ukuqabula okundizayo
Amathoyizi Esetshenziswe Kabusha: Umtshingo Womlingo!
Ubuciko bezingane: Isifihla-busu se-pig